RN4- Andriba : Mpandeha dimy maty navadiky ny kamio -
AccueilSosialyRN4- Andriba : Mpandeha dimy maty navadiky ny kamio
11/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Namoizana ain’olona miisa dimy indray ny lozam-pifamoivoizana nateraky ny kamio, na irony antsoina hoe “car-andalana” irony ny alin’ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora tany ho any. Tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra, teo amin’ny PK227+500, tsy hiditra ny tetezana Kamolandy, kaominina Andriba , Distrikan’i Maevatanàna no nitrangan’izany. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia olana teo amin’ny hisatra no nahatonga ny loza, ka niteraka fivadibadihan’ity fiara vaventy fitateram-bahoaka avy ao amin’ny kaoperativa KOPFFM ity. Avy aty Antananarivo handeha hizotra ho any Sambava io kamio nitondra mpandeha miisa 77 io no tafavoaka ny arabe, ary nivadibadika tany amin’ny ankavanan-dalana avy eo. Nihorirana nivadika moa no nahitana io fiara be io taorian’izay. Vokatry ny loza mafy nihatra tamin’izy ireo, dia namoy ny ainy ny dimy tamin’ireo mpandeha izay nahitana vehivavy iray. Olona 71 kosa no naratra, ka ny 02 tamin’izy ireo no tena voa mafy. Olona 01 kosa no tsy naninona na dia teo aza ny hamafin’ny loza. Ankoatra ireo namoy ny ainy moa dia nahitana fahasimbana hatrany amin’ny 80 isan-jato ihany koa ity fiara be ity sy ny entan’ireo mpandeha niharan-doza ireo. Tonga tany an-toerana avy hatrany ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, izay notarihin’ny kaomandan’ny vondron-tobim-paritra any an-toerana vantany vao nahazo fampandrenesana mahakasika ity loza ity, nanao ny vonjy aina sy nijery ifotony ny zava-niseho.
Nisy tamin’ireo naratra no nalefa tany amin’ny hopitalin’ i Maevatanàna. Tao kosa ireo nampiakarina avy hatrany teny amin’ny hopitaly Hjra Ampefiloha. Raha ny lalàna, dia tsy tokony natao hitaterana olona mihitsy ny kamio fa natokana hitondrana entana irery ihany. Raha tsy afa-miala amin’izany anefa ireo mpifamezivezy any amin’iny distrikan’i Sambava iny, dia farafaharatsiny any amin’ireo lalana tena ratsy vao hafindra amin’ny fiara vaventy tahaka ireny ireo mpandeha mba hialana amin’ny sampona tahaka izao. Matetika, dia eo anelanelan’ ny distrikan’Ankazobe sy Maevatanàna foana no hisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina sy hahafatesana olona any amin’iny RN4 iny. Vao ny talata maraina lasa teo tokony ho tamin’ny 05 ora tany ho any ihany koa mantsy no nisian’ilay lozam-pifamoivoizana nateraky ny fiara taksiborosy teo Ankazobe, 100 kilometatra tsy hahatongavana aty Antananarivo, izay namoizana ny mpamily sy vehivavy mpandeha iray, ary dia olana teo amin’ny lafin’ny hisatra hatrany no nitarika ny loza. Raha tsiahivina, dia tao amin’io distrika io ihany koa no nahavoa ilay Boeing nitondra Zaika be ho any Mahajanga tamin’ny taon-dasa, izay nahafatesana olona miisa 19. Teo anatrehan’ity tranga ity moa, dia tonga namangy ary nanolotra vola 05 tapitrisa Ariary ho an’ireo marary miisa 11 tao amin’ny hopitaly Hjra ny solontenan’ny governemanta, izay nahitana ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ying Vah zafilahy amin’ny maha minisitra mpiahy azy ny faritr’i SAVA. Tonga teny an-toerana nisolo tena ny filoham-pirenena mivady ihany koa ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard sy ny minisitry ny Asa Vaventy, Razafimandimby Eric.
virgin hair dans « RAMILY TEODORIN ! »
Nankatoavina teny amin’ny antenimieram-pirenena avokoa ireo volavolan-dalàna miisa 3 hifehy ny ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka, mifehy ny fifidianana Filoham-pirenena, mifehy ny fifidianana Solombavambahoaka. Miisa 79 ireo solombavambahoaka no nandany izany omaly. Amin’ ny ...Tohiny
virgin hair: Title [...]that would be the finish of this report. Right here you will discover some web-sites that we feel…